Ku rakib emulatorka nds4iOS adigoon u baahnayn Jailbreak | Wararka IPhone
Mid ka mid ah yutiilitida ugu waaweyn ee jiilkii ugu dambeeyay ee iPhone, shaashadeeda weyn awgood, waa in loo adeegsado sidii emulator ahaan. Nasiib darrose muddo dheer bilaa Jailbreak adoo adeegsanaya emulators on macruufka waa wax aan macquul aheyn, laakiin tan way dhamaatay. Thanks to iEmulators waxaan ku dhejin karnaa emulatorka 'Nintendo DS emulator' ee macruufka si deg deg ah oo fududAdoo si fudud u rakibaya codsi ka socda Safari, isla markaana u oggolaanaya rukhsad ku kalsoonaanta aaladdayada, waxaan awoodi doonnaa inaan ku raaxeysano dhammaan cayaarahaas ku dayashada ah ee aan dooneyno iyo inaan helno.
Qaabkii hore ee Jailbreak wuxuu ahaa inuu lahaado Mac isla markaana uu awood u yeesho inuu soo ururiyo koodhka isha ee dalabka si uu ula jaan qaado iPhone-keena, laakiin Hadda kuwa aan diyaar u ahayn inay Jailbreak ku rakibi karaan tallaabooyinkan fudud. Waxaan tagnaa websaydhka rasmiga ah ee iEmulators ee ku dhex jira Safari aaladda macruufka ah ee aan ka doonayno inaan ku isticmaalno emulator-ka, marka aan gudaha u galno, waxaan u gudubnaa qaybteeda "Apps" oo waxaan hoos ugu dhaadhacnaa illaa aan ka helayno "nds4iOS" oo la cusbooneysiiyay saxiixeeda. dhawaan oo waxay u oggolaaneysaa rakibidda fog.
Waxaan si fudud u gujineynaa oo aan sugeynaa inay dhameystirto soo dejinta, horey waxaan u gujineynaa "rakibi" ogeysiiska soo-baxa oo ka soo muuqan doona shaashadda. Marka ugu horeysa ee aan bilowno arjiga, waa inaan dooranaa "aaminaad" soo-saarista cusub ee ku saabsan kalsoonida uu uqalmayaha codsigu u qalmo. Oo waxaan horeyba uheli doonnaa emulator-ka si buuxda loogu heli karo qalabkeena macruufka ah.
Si aan u isticmaalno ROM-yadayada, si fudud ayaan u cadaadinaa iyaga oo ku darnaa daruurteenna, sida Dropbox. Markii aan halkaa tagno, waxaan aadeynaa ROM-ka su'aasha laga taagan yahay oo waxaan dooraneynaa "Open in ..." markii aan dooranayno feylka, si aan ugu sii gudubno xulashada "nds4iOS" oo markaa ku rakibno ROM-ka emulator-ka. Si kastaba ha noqotee, ha iloobin in soo saaraha milkiilaha aan lagaranayn xigashooyinka, laakiin ilaa hada, JAILBIL la'aan majiro waddo kale oo loogu raaxeysto emulators-ka, sidaa darteed xusuusnow in haddii aad rakibtid codsigan, Actualidad iPhone mas'uul kama aha dhibaatooyinka suurtagalka ah ee amniga habkan.
Waxaan ku xusuusinaynaa in rakibidda noocaan ah softiweerku ay ku saleysan tahay caddeyn iyo saxiixyo codsi oo Apple aysan oggoleyn, inta badanna, waa lagala noqdaa maalmo iyo saacado gudahood. Marka, waxay u egtahay in waqtiga aqrinta qodobkaan shahaadada lagala noqday oo aysan ogoleyn rakibida. Haddii kale, ka faa'iideyso oo soo degso sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid, laakiin haddii shahaadada lagala noqday oo aysan oggolaanayn rakibo, laga bilaabo Actualidad iPhone waxba ma qaban karno, waan kula socodsiin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Ku rakib emulatorka nds4iOS adigoon haysan Jailbreak
Haddii wax si fiican loo hubiyay ka hor intaadan dhajin, ma jiri doonaan 4 qoraal oo isla isticmaalaha ah. Heerkanna waxaan ku gudbin karnaa liiska sida dugsiga, Teto Reyes, oo jooga; Gerardo Espinosa, hadda; Edgar García, joog; ……….
Marka sideen u tirtiri karaa shahaadadaas? Mararka qaarkood ma oggola in la waafajiyo iTunes 🙁
Waxay soo baxday in rakibiddu ay tahay ... Yaab maxaa yeelay waxaad nasiib u yeelan kartaa markii ugu horreysay ama waa inaad isku daydaa 50 jeer, laakiin goor dhow ama goor dambe ayay rakibaysaa!
Xaaladaha badankood way soo dejineysaa ka dibna way kuu sheegi doontaa (markay rakibineyso) oo soo degsashadu horey ayey u dhammaatay, inaan la soo dejin karin!
Xaqiiqda inaad awood u leedahay inaad rakibto ma damaanad qaadayo sii wadideeda, hal maalin oo wanaagsan ayaad ciyaar ciyaari doontaa oo markaad furto dalabka wuu xirayaa! Oo waa inaad kaliya tirtirtaa oo aad dib u dhigtaa (iskuday)
Ku jawaab Eclipsnet
Maniati Ko dijo
Mauricio Andres Valdes Martinez ArKanhell Gabriel ayaa si deg deg ah u dhigay !!!
Jawaab Maniati Ko
Andres Viteri dijo
Markii aan dajinayo qolalka kama furi karo emulator-ka
Ku jawaab Andres Viteri
Dani garcia gullen dijo
Jawaab Dani Garcia Guillen
Sida ay halkaas ku sheegayso, waxa dhacaya goorta lagu xirayo emulator-ka akoonka 'Dropbox' ee leh roms-ka aniga igama tagayo
Jawaab Adrian Quesada
Ciyaaraha sidee loo soo degsadaa? Jawaab !!!
Rubén Darío P. Gómez dijo
Waxaan isku dayi doonaa inaan ku sameeyo iphone 6 oo leh 8.4
Jawaab Rubén Darío P. Gómez
Waan soo dajiyay barnaamijka oo waxay umuuqataa inay sifiican udhaceen, waxa aanan garanayn, waa meesha ciyaarta roms-ka lagala soo baxo
Iyaga ayaa soo dejista iyaga oo ikhtiyaarka ah in lagu furo isla barnaamijka nds4ios uu soo muuqan doono! 😉
Meesha laga soo dejiyo barnaamijka
Jawaab Jolus Pasat
Ku jawaab Sebas Ledezma
Cami Ledezma dijo
Waa maxay eeyaha haha
Ku jawaab Cami Ledezma
Waan arkaa dhamaan rom-yada aan soo dejiyey laakiin markaan furo midkood, qof kaliya ayaa garanaya sababta?
Waad salaaman tihiin, Juan Carlos. Haddaanan qaldanayn, waxay kala noqdeen shahaadada. Isticmaalayaal badan ayaa ku qasbanaan lahaa inay xaqiijiyaan, laakiin kiisaska sidan oo kale ah shahaado shirkado ayaa loo isticmaalaa waxayna u shaqeysaa aalado badan. Apple way ka noqon kartaa iyaga waana inaad sugto inta ay kor u qaadayaan mar kale.
wanaagsan ma jiraa qof og sababta barnaamijku u burburayo mar haddii la rakibo oo qalabku dansan yahay? Haddii aad mar kale daarto oo aad isku daydo inaad gasho abka, mar dambe iskama xiri karo